Kuyini ukushisa kweLanga? Konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokushesha lapho kuphuma ilanga, into yokuqala esiyibonayo yinkanyezi ebusa eyethu uhlelo lwelanga. Ilanga alikhanyisi iplanethi yethu kuphela, kodwa futhi liyimbangela yokuba khona kwezimo zezulu nokuphila emhlabeni. Abantu abaningi bake bazibuze ukuthi liyini izinga lokushisa kwelanga. Futhi ukuthi ilanga libhekwa njengomthombo omkhulu wamandla enuzi asenkabeni yesimiso sonozungezilanga.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ifayili le- ukushisa kwelanga, inezici ezinjani nokuthi kubaluleke ngani.
2 Liyini izinga lokushisa kwelanga
3 Ukubaluleka kwe-photosphere ekushiseni kwelanga
Esingakakulinganisi ngisho nokushisa kungumthombo omkhulu wamandla enuzi atholakala maphakathi nesistimu yelanga. Ithathwa njengenkanyezi. Izinga lokushisa kwalo liphezulu kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi usondele nje kulo. Kakade kude le okuya kwiplanethi yethu kusuka elangeni kungasishisa isikhumba sethu futhi kubhekane nokusha okungathi sína. Imisebe yelanga ingena emkhathini wethu yize kunezihlungi ezahlukahlukene ezisiza ukunciphisa imisebe ye-ultraviolet efinyelela kithi. Noma kunjalo, kude kangako kungasidalela umonakalo.
Kunabantu abashonile ngenxa yokushiswa yilanga isikhathi eside kakhulu futhi ngaphandle kokuvikelwa. Ngakho-ke, awucabangi ngokusondela elangeni. Kungaholela kumdlavuza wesikhumba kanye nokuphela kwamanzi emzimbeni, phakathi kwezinye izifo. Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani amaplanethi angagcina impilo. Ngokuya ngesikhundla esikuso isimiso sonozungezilanga maqondana nenkanyezi enkulu, singaba nezinga lokushisa elihlala liyindawo yokuhlala. Lokhu kwenza iplanethi yomhlaba ibhekwe njenge elinye lamaplanethi angena 'endaweni okuhlala kuyo'.
Akagcini ngokusifudumeza, avumele ukuba khona kwezimo zezulu noDavid emhlabeni, kepha futhi usinikeza amavithamini. Ukuthola ukukhanya kwelanga ngamanani amancane kusinikeza amandla amakhulu kubantu nakwezinye izidalwa eziphilayo. Ukushisa kwelanga kuncike ezintweni eziningi. Izinga lokushisa kwelanga esilibonayo lincike kakhulu inkathi yonyaka esiyikho, ukufudumala kwembulunga yonke, nezinye izici ezifana nenani lamagesi abamba ukushisa emkhathini.
Liyini izinga lokushisa kwelanga
Umkhathi wethu uthintekile isenzo somuntu nokukhishwa kwamagesi angcolisayo futhi usuvele unomsebenzi ofanayo njengakuqala. Njengoba ilanga liyinto enkulu kunazo zonke yasezulwini ohlelweni lwelanga kuhlale kuyimpikiswano. Ngasekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, ososayensi bakwazi ukudalula izinga lokushisa kwelanga. Leli zinga lokushisa yilokho okukhombisa ubuso belanga. Ngokusobala, ngaphakathi kwelanga kuzoba nokushisa okuphezulu.
Ngokwesilinganiso sokushisa kwelanga uma usebenzise ukukhanya kwaso nokusatshalaliswa maqondana nobude besilinganiso sobubanzi obubonakalayo. Kwalinganiselwa izinga lokushisa elizungeze ama-6000 degrees Celsius, lokhu kungqimba lwangaphandle olubonakala kakhulu lwelanga. Umbala ophuzi wale nkanyezi ukhiqizwa ngenxa yokushisa kwawo okuphezulu. Kucatshangwa ukuthi uma izinga lokushisa lishintsha futhi lenyuka lizoguqula umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngakolunye uhlangothi, uma izinga lokushisa kwelanga lehla, laliba bomvu kakhulu.
Ilanga linezingqimba eziningana njengoba kukhona izingqimba zomhlaba. I-photosphere yileyo ndawo ekhombisa amabala ebusweni bayo ngenxa yokuba khona kokuqhuma ngamandla kwamandla. Lokhu kuqhuma kubonakala kule ndawo futhi yikho okukhiqizwa ngamandla amakhulu agcinwe elangeni. Amandla la avela ngaphakathi kwelanga. Ingcindezi iyimbangela yokusabela kwenuzi okwenzeka ngaphakathi kwelanga. Lokhu kusabela kwenuzi kwenzeka ngenxa ye-hydrogen nuclei ecwilayo yakha i-helium nuclei. Yilapho ukuhlangana kwenuzi kwenzeka khona.
Ukuze kuhlangane inuzi, kufanele kube khona ama-molecule e-hydrogen amahhala, ingcindezi enkulu, kanye nezinga lokushisa eliphakeme. Lapho lezi zinguquko ezi-3 zenzeka, ukuhlangana kwenuzi kwenzeka. Lokhu kusabela kubangela ukuhanjiswa kokuqhuma kwamandla ebusweni belanga. Ukushisa nokukhanya kukhishwa yilo hlumela. Kulinganiselwa ukuthi ngomzuzwana ngamunye kunamathani ayizigidi ezingama-700 e-hydrogen aguqulwa abe yi-helium ash. Amandla amsulwa alinganiselwa ezigidini ezinhlanu zamathani aphuma kule nqubo.
Enye yezindlela zokukala izinga lokushisa kwelanga ukukala inani lemisebe efinyelela eMhlabeni bese usebenzisa ibanga nosayizi welanga ukulibala.
Ukubaluleka kwe-photosphere ekushiseni kwelanga
I-photosphere yindawo ebhekele ukukala ukukhanya okubonakalayo esikuthola elangeni. Yindawo eminyene kakhulu enomoya wayo. Noma kungabonakala kufiphele, yisifunda esibanda kakhulu selanga. Lapho sibona ngamehlo lo ungqimba singabona uhlobo lwediski njengamachashazi amnyama akhiwe ngokuqhuma ngamandla kwamandla. Kulezi zindawo kulapho kwakhiwa khona amandla kazibuthe elanga anesibopho sokulawula yonke imisebenzi yelanga.
Kusuka enkabeni yelanga kulapho kuphuma khona ukushisa okukhulu kakhulu. Ingaphakathi elingaphansi kwe-photosphere kulapho kukhiqizwa khona amabhamuza wezinto ezishisayo ezakha izifunda ezicwebezela kancane. Ukuze ukwazi ukuhumusha zonke lezi zindawo zelanga, izindlela zokulinganisa izinga lokushisa kufanele zisetshenziswe. Yile ndlela esazi ngayo ukuthi kunezindawo ze-photosphere lapho kwakhiwa khona izindawo ezikhanyayo nezinye izindawo ezimnyama ezibangelwa yi-plasma ebandayo. Le plasma nayo ikhiqizwa ngaphakathi elangeni.
Njengeplanethi yethu, kunemisinga ye-convection elangeni, kunephethini yokuhamba okuzokwenza ukuthi lezi zindawo zaziwe njenge i-granulation yelanga. Le granulation yelanga inesibopho sokuhambisa konke ukushisa.
Ukushisa kwelanga kwangaphakathi kungu-15 million degrees Celsius, kanti ingaphandle liyi-5.500 degrees Celsius.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokushisa kwelanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ukushisa kwelanga
I-geologists engcono kakhulu emlandweni